Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment समाचार हुबहु चोर्‍यो भनेर आरोप लगाउने पत्रकारलाई हाम्रो स्पष्टीकरण - Pnpkhabar.com
पिएनपिखबर, भक्तपुर : “जाेड्दैछाै अष्ट्रेलियाका नेपाली” भन्ने मूल नारा राखेर अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित ब्लग nepaltube.com.au ले हाम्रो भर्खरै पढाईको शिलशिलामा अष्ट्रेलिया पुग्नुभएकी पत्रकार पुजा बानियाँले तयार पार्नु भएको समाचार “ब्रिसबेनमा आयोजित ‘सपोर्ट फर च्यारिटी इभेन्ट’ कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न” प्रति प्रश्न उठाउनु भएको र पत्रकार पुजा बानियाँको चरित्र हत्या हुने गरी नै सामाजिक संजालमा गरिएको दुष्प्रचार प्रति हामी पिएनपिमिडिया प्रा : लि को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
“प्रवासमा रहेर पनि पत्रकारितामार्फत नेपाली समुदायलाई जोड्ने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली पत्रकारहरुको योगदानबाट यो अनलाईन पत्रिका संचालित छ ।” यति राम्रो उदेश्य लिएर प्रवासमै बसी पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको तपाईहरुको कामलाई हामी सह्रानीय मान्दछौं तर तपाईहरुले एउटा ‘इमर्गिङ्ग नेपाली जर्नालिष्ट’ प्रति गरेको व्यवहारको हामी घोर भर्सना गर्दछौं। यस ब्लगका पत्रकार सरल गुरुङ ज्यूले जसरी आक्रोशित मुद्रामा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो हामीले त्यसको प्रतिउत्तर यो बिज्ञप्ति मार्फत नै दिने सानो प्रयास गरेका छौँ।
सरल जी तपाईहरु जस्तो दशौँ वर्ष पत्रकारिता गरेर या पत्रकारितामा माष्टर्स गरेर हामी पत्रकारिता पेशामा संलग्न भएका हैनौं। यो देशको माया कै कारणले अमेरिका र अष्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशको ‘ग्ल्यामर्स लाइफ’ त्यागेर समाज रुपान्तरणमा केहि नौलो आयाम छर्न सक्षम हुन्छौं कि भन्ने सोचका साथ हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका हौँ । तपाईहरुको पहिलो आरोप “समाचार चोरी” भयो र दोश्रो आरोप “तपाइको समाचारलाई हाम्रो समाचारले गलत साबित गर्यो भन्ने रहेको छ।” सबै भन्दा पहिला बौद्धिक सम्पत्ति (समाचार) चोरी भयो भन्ने विषय । स्मरण रहोस सरल जी हामी नेपालको नियम कानुन र पत्रकार आचारसंहिता पालाना गरेर नै आज चौथो बर्षमा पत्रकारिताको बामे सर्दैछौं। कहिँ कतै हामीबाट त्रुटी भएन वा हुन सक्दैन भनेर हामीले कदापी भनेका छैनौँ। मानिस भएपछि गल्ति अवश्य हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा तपाइको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी भयो भन्ने बिषयमा हामी सहमत हुन सकेनौं। कार्यक्रम आयोजकका राजु कान र क्षत्र थापासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हाम्रो पत्रकारले तयार पार्नु भएको उक्त समाचार तापाईहरुको समाचारलाई खण्डन गर्ने र फैलाइएको अफवाहको बिषयमा सत्य तथ्य बाहिर लेराउनु नै मूल उदेश्य रहेको पाइयो। कुनै कार्यक्रमको बिषयमा जानकारी दिँदा १ वाक्य हुवहु मिल्नुलाई हामी संयोग मात्र मान्दछौं यधपी यो आयोजक संस्था ‘ब्लाक आइ क्रियसन’ले दिएको जानकारीको आधारमा लेखिएको हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । तपाईलाई यो स्पष्टिकरणसँग सहमती छैन भने आयोजक संस्थासँग यथार्थ बुझ्नुहुन या नेपालको कानुन अनुसार कानुनी उपचार खोज्नुहुन समेत हामी आग्रह गर्दछौं।
“कार्यक्रमको अन्त्यतिर उद्घोषक र महानायक टेबल-टेबलमै पुगेर सहभागीकोे व्यक्तिगत विवरण भन्दै चन्दा दिन दबाव दिइएको एक जना सहभागीले बताए।” तपाईको यो समाचारको विषयमा हामीले आयोजक संस्था र सहभागीहरुसँग गरिएको कुराकानी र दिएको इन्फर्मेसनका आधारमा अफवाह फ़ैलाइयो भनि समाचार तयार पारेका हौँ। तपाइँले एकजना सहभागीसँग सोधेर यो समाचार एकपक्षिय ढंगले लेख्न सक्नुहुन्छ भने हामीले यसको सत्य तथ्य यो हैन भनेर लेख्दा तपाइँको टाउको दुखाइको बिषय किन बन्यो ? तपाइँले एकपक्षिय ढंगले लेख्दा कसैले तपाइँसँग स्पष्टीकरण सोध्यो कि सोधेन ? यो जानकारी गराइदिनुस।
“म कान्तिपुरको सम्वाददाता हुँ” भन्दै जसरी मलाई हुँकार देखाउनुभयो आजको नेपाली पत्रकारितामा त्यो रवाफ अब कदापी चल्दैन सर। तपाइले लेखेकै सहि अनि हामीले लेखेको चाहिँ ? अझ तपाइको समाचारमा त महानायक आफैं टेबल-टेबलमै पुगेर सहभागीकोे व्यक्तिगत विवरण भन्दै चन्दा दिन दबाव दिइएको भनि लेख्नु भएको छ। के यो समाचारले नेपालको गहना महानायक हमालको मानहानी भएन होला ? एकपटक सोच्नुस त !!! कसैसँगको व्यक्तिगत आरिषका कारण देशकै राष्ट्रिय कलाकारको यत्रो ठुलो बेइज्जत गर्नु पाप होइन ?
सरल जी हामी त बामे सर्दै गरेका पत्रकार हौँ, केहि सिक्दै छौं अनि समाजलाई केहि दिन खोज्दै छौं। तपाइले आफ्नो समाचारमा लेखे जस्तो “अष्ट्रेलियाभरी यो च्यारिटी गर्ने जिम्मा पाएको तास इभन्ट इन्कर्पोरेसनले टेबल-टेबलमा महानायक गएर पैसा उठाउनु सहि नभएको भन्दै स्थानिय आयोजकलाई सचेत गराएको छ” भन्ने बिषय पनि झुठो साबित भएको छ। तास इभेन्टका क्षत्र थापाले यो हल्ला मात्र हो मैले यस्तो बोलेकै छैन भन्नु भएको छ। अब विश्वास कसको गरौँ सरलजी ? तपाइको या आयोजकको ? हामी त हेर्नुस सात समुन्द्र पारी नेपालमा छौँ जसले जे इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसमै भर पर्ने हो। तपाइले त स्थलगत रिपोर्टिंङ गर्नुभएको तर कसरी गलत लेख्नुभयो त ?
सरल जी तपाईंको र आयोजक टिम बीचको विवादबारे हामीले प्रष्ट जानकारी पाईसक्यौँ र यो बारे धेरै नबोल्नुनै उचित होला। तर संचारक्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने संस्था कदापि होइन। आफ्नो राष्ट्र आफ्नो परिवारबाट टाढा रहनुभएको तपाईं सम्पूर्ण ब्रिसबेनबासीहरु सँग हाम्रो केहि व्यक्तिगत स्वार्थ या रिसिबी छैन र रहने पनि छैन। तर तपाईंहरु बीच सद्भाव कायम रहोस भनि हामी सदैव कामना गर्दछौं। हामीबाट साच्चै कुनै गम्भीर त्रुटी भएको भए पनि हृदयदेखि माफी माग्दछौँ र यदि कसैको व्यक्तिगत हानीनोक्सानी हुन गएको छ भने उचित कानुनी परामर्श लिनुहुन पनि आग्रह गर्दछौं।